Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpitolona Mfm: Nodimandry omaly i Kama Julien Rakotonirainy
Mpitolona Mfm: Nodimandry omaly i Kama Julien Rakotonirainy
Banga iray indray koa ny laharan’ny mpitolona nirona tamin’ny hery ankavia teto Madagasikara. Nodimandry omaly mantsy i Julien Rakotoniriany, fantatra ny maro amin’ny hoe « Kama ». Mpitolona amin’ny hery ankavia hatrany ampiandohan’ny Mfm izy, ary isan’ireo nanabe voho ny Mfm tany anatin’ny fokontany maro, na teto Antananarivo na tany amin’ny faritany.
Isan’ny manampahaizana teo anivon’ity antoko ity koa i Kama.
Tamin’ny 1989 dia nanangana ny Fikambanana Antso i Julien Rakotonirainy sy i Benjamina Ramanantsoa. Notendren’ny Amiraly Ratsiraka ho mpikambana tao amin’ny Filankevitra farantampon’ny tolom-piavotana (Csr) i Kama taorian’ny fifidianana filohampirenena teto Madagasikata tamin’ny taona 1989.
Tsy nitsahatra nanao fikarohana ihany koa anefa izy, ary nanoratra boky maro momba ny raharaham-piaraha-monina Malagasy sy ny raharaha pôlitika teto Madagasikara.
Mirary fiononana ho an’ny fianakavian’i Julien Rakotonirainy, ary mankahery azy ireo noho izao fisarahana an-tany izao izahay eto amin’ny La Gazette de la Grande Ile.
Fifidianana filoham-pirenena: Mananika ny 10 tapitrisa ny isan’ny mpifidy
Nampafantaran’ny CENI omaly ny fivoahan’ny lisitra ny mpifidy vonjy maika ho ampiasaina amin’ity taona 2018 ity. Marihana fa tamin’ny 31 janoary lasa teo no nifarana ny fanavaozana ny lisi-pifidianana izay niandraiketan’ny CENI na ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Raha ny tarehimarika dia mahatratra 9.928.273 ny isan’ireo mpifidy voasoratra ao anatin’io lisitra vonjy maika io, izany hoe raha miampy mpifidy 7 alina dia tonga 10 tapitrisa. Io isa io no nieritreretin’ny CENI ho isan’ny mpifidy handray anjara amin’ny fifidianana izay ho tanterahina amin’ny faran’ny taona izao. Tsara ihany ny mampahatsiahy fa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany natao tamin’ny taona 2013 dia latsaka kely ny 8 tapitrisa teo ho eo ny isan’ireo mpifidy voasoratra anarana tao anatin’ny lisi-pifidianana. Mbola vonjy maika moa io lisitra nivoaka omaly io izay mbola haverina eny anivon’ny fokontany mba ahafahan’ny olom-pirenena rehetra manamarina ny anarany. Ny CENI izay manentana hatrany ny be sy ny maro mba hanara-maso ny lisi-pifidianana mba hisian’ny fangaraharana.